ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကျဆုံးခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကိုဒါလေးတွေလုပ်ပေးပါ…”ဆိုတဲ့ PDFရဲဘော်တစ်ဦး – Shwe Thadin
ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကျဆုံးခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကိုဒါလေးတွေလုပ်ပေးပါ…”ဆိုတဲ့ PDFရဲဘော်တစ်ဦး
03/01/2022 admin News 0
လေးကေ့ကော်က တော်လှန်ရေးရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ ကြိုတင်ရေးသားထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်လေးကေ့ကော်က တော်လှန်ရေးရဲဘော်လေးတစ်ဦးရဲ့ ကြိုတင်ရေးသားထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်
“ကျွန်တော်အရာရာတိုင်းကိုအဆုံးထိတွေးထားပြီးသားပါ.. မနေ့က ကျွန်တော့်တို့ ရဲဘော်တွေ ကျဆုံးတော့ ကျွန်တော်လဲ မကျဆုံးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ… တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာ သူဘက်ကလဲ ကျမယ်.. ကိုယ့်ဘက်ကလဲကျမယ်..ဒါကဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ…
ကျွန်တော်သေမှာကိုမကြောက်ဘူး..အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးမျာကျဆုံးသွားခဲ့ရင် မပြောခဲ့လိုက်ရ မမှာခဲ့လိုက်ရဖြစ်မှာဆိုးလို့ဒါတွေကိုကြိုပြီးတောင်းဆိုထားပါရစေ..အကယ်၍ ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ကျွန်တော်ကျဆုံးခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကိုဒါလေးတွေလုပ်ပေးပါ…”.
ေလးေက့ေကာ္က ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳတင္ေရးသားထားတဲ့ စာေလးတစ္ေစာင္ေလးေက့ေကာ္က ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေလးတစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳတင္ေရးသားထားတဲ့ စာေလးတစ္ေစာင္
“ကြၽန္ေတာ္အရာရာတိုင္းကိုအဆုံးထိေတြးထားၿပီးသားပါ.. မေန႔က ကြၽန္ေတာ့္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြ က်ဆုံးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လဲ မက်ဆုံးဘူးလို႔ေျပာလို႔မရဘူးေလ… တိုက္ပြဲတစ္ပြဲမွာ သူဘက္ကလဲ က်မယ္.. ကိုယ့္ဘက္ကလဲက်မယ္..ဒါကျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပါပဲ…
ကြၽန္ေတာ္ေသမွာကိုမေၾကာက္ဘူး..အကယ္၍ကြၽန္ေတာ္ဒီေတာ္လွန္ေရးမ်ာက်ဆုံးသြားခဲ့ရင္ မေျပာခဲ့လိုက္ရ မမွာခဲ့လိုက္ရျဖစ္မွာဆိုးလို႔ဒါေတြကိုႀကိဳၿပီးေတာင္းဆိုထားပါရေစ..အကယ္၍ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္က်ဆုံးခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုဒါေလးေတြလုပ္ေပးပါ…”.
တိုက်ပွဲတွင် ဦးခေါင်းကို ထိမှန်ကာကျဆုံးသွားခဲ့သည့် အာဇာနည်သူရဲကောင်း မောင်ဟင်နရီ
PDF ရဲဘော်လေးရဲ့ နံနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှာ ကျောပေါ်တက်ပြီး လာဆော့ကစားနေတဲ့ ခွေးလေးရဲ့ဗီဒီယို